.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ပိုပို Songs Collection
ပိုပို Songs Collection
ဟိုအရင်နေ့က ပိုပိုရဲ့ ဘာမှမလိုဘူး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး စပြီး နားထောင်မိကတည်းက သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အသံလေးနဲ့
တကယ် ခံစားချက်ရှိတဲ့ သီချင်းစာသားတွေကို အရမ်း ကြိုက်သွားလို့ သူ့သီချင်းတွေ အားလုံးနီးပါး လိုက်ရှာဒေါင်းပြီး
နားထောင်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးက အရင်လိုပါပဲ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ပြီးတော့ သီချင်းတွေအားလုံးကို
သူကိုယ်တိုင်ရေး ၊ သူကိုယ်တိုင်ဆိုထားတာပါတဲ့။ ကဲခု သူ့ရဲ့ ချစ်ဖူးခဲ့သမျှ Album ထဲက သီချင်းတွေရော နောက်ထပ်
သူဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေရော အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ ပိုပို Songs Collection ဆိုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ
ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အောက်မှာ နားထောင် ခံစားပြီးတော့ ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေ ဒေါင်းယူသွားပါ။
1 အတ္တ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 2.40 MB
2 အရင်လိုပါပဲ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.80 MB
3 ဘုရားပေးတဲ့ဆုလာဘ် ပိုပို ၊ ဖြိုးပြည့်စုံ Click Here !! Click Here !! 1.70 MB
4 မိုးညများနဲ့အတူ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.70 MB
5 ချစ်ဖူးခဲ့သမျှ ပိုပို ၊ စည်သူ Click Here !! Click Here !! 2.00 MB
6 ပြန်လာခွင့်ရှိတယ် ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.60 MB
7 မိဘမဲ့ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
8 ဘာမှမလိုဘူး ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.75 MB
9 မင်းကိုသတ်ပစ်ချင်တယ် ပိုပို Click Here !! Click Here !! 2.05 MB
10 အလွမ်းနယ်မြေ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.90 MB
11 လက်ထက်ပွဲ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.60 MB
12 မေတ္တာအလင်းရောင် ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.95 MB
13 Apple Story ပိုပို Click Here !! Click Here !! 2.15 MB
14 ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
15 Breaking Heart ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.50 MB
16 First Love ပိုပို ၊ BK Click Here !! Click Here !! 1.75 MB
17 Love U Love Me ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.80 MB
18 မတူညီခြင်း ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.75 MB
19 မင်းအနား ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.75 MB
20 နားခိုရာ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
21 ငါ့ဘဝနဲ့ငါ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 2.15 MB
22 ငါမုန်းတယ် ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.75 MB
23 ပိတောက်တွေဝေတဲ့သင်္ကြန် ပိုပို ၊ Demo Jacktoo Click Here !! Click Here !! 1.85 MB
24 ပြန်လာခွင့်ရှိတယ် ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.60 MB
25 ချစ်ဖူးခဲ့သမျှ [ Next Version ] ပိုပို ၊ စည်သူ Click Here !! Click Here !! 2.05 MB
26 သတိရရင် ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.50 MB
27 သရေပွဲ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.30 MB
28 ဝေးမယ်ဆိုတာသိရက်နဲ့ ပိုပို Click Here !! Click Here !! 1.85 MB
29 ဝေးမယ်ဆိုတာသိရက်နဲ့ [ New Version ] ပိုပို ၊ BK Click Here !! Click Here !! 1.80 MB
Photo Credit to www.ehlar.com
Posted by Thurainlin at 07:52
Labels: Mp3 Album, Music